Taangiga taangiga otomaatiga ah ee maareynta walxaha khaliijka
Khalkhalgelinta alxanka Iyadoo 1000-7000mm istaroogga qaadista wax ku ool ah iyo istaroogga ka noqoshada.
Alxanka koombada mashiinka kobaca Boom awoodda dhamaadka ilaa 300kg. Iyadoo 100x100mm iskutallaab iskutallaab ah.
Qalabaynta alxanka biibiile otomaatiga ah ee taangiga / dhuumaha / weelka tolida toosan iyo tolida wareega.
Wareegtada alxanka waxay ka kooban tahay Halbeeg hal wadis ah iyo hal unug oo bilaa camal ah.
Qalabaynta kumbuyuutarka alxanka otomaatiga ah sanduuqa xakamaynta gacanta ee leh shaqooyinka, FWD leexashada, leexinta REV, Dejinta xawaaraha
Xawaaraha wareejinta wareejinta biibiile Alxanka waa 100 ~ 1000 mm / min illaa VFD.
Automatic 100kg 300kg 600kg 1000kg alxanka positioner
Alxanka Meelaynta wuu foorari karaa 0 illaa 90 ° ~ 120 °, oo wareega 360 ° iyadoo la xakameynayo VFD.
Qalabka alxanka otomaatiga ah Heerka danab waa 380V, 50HZ, 3PH. Danab kale ayaa loo habeyn karaa.
100kg alxanka booska alxanka Nidaamka la kontoroolo waa sanduuqa kontoroolka gacanta ee fog-fog iyo cagaha beddelkiisa.
Mashiinka alxanka alwaaxa kumbuyuutarka kumbuyuutarka
Mashiinka alxanka mashiinka alwaaxa mashiinka alwaax wuxuu korsadaa barnaamijka PLC la soo dejiyo, Mashiinka alxanka alwaaxa mashiinka alwaax ee otomaatiga ah wuxuu leeyahay astaamo saxsan iyo lacag dayactir hooseeya. Dhererka jirka waa 7.2 mitir, sidoo kale waxaan qaabeyn karnaa iyadoo la raacayo codsiga macaamilka. Dhexroor ee qaybta shaqada ee usha waa inay ahaataa 42mm-180mm.
Automatic 12 mitir mashiinka alxanka tolmo dheer
Alxanka alxanka motor wiishka: 0.55kw
Dhererka habboon ee biibiile: 12000mm
Habka alxanka: alxanka arkay
Alxanka alxanka awooda xamuulka: 10T
Xawaaraha socodka ee alxanka: 250 ～ 2500mm / min
Automatic 1000w 1500w 2000w mashiinka alxanka laysku gacanta
mishiinka alxanka gacanta Xawaaraha alxanka Fast, 2 ~ 10 jeer ka dhakhso badan alxanka dhaqanka.
1000w mishiinka alxanka gacanta Hawlgal fudud ayaa u baahan tababar la'aan.
1500w mishiinka alxanka gacanta Alxanka tolli qurux quruxsan siman oo qurux badan, uma baahna turxaan, waqtigaaga badbaadi.
Automatic CO2 Mig Mag Inverter Gas isha alxanka gaashaaman
Dabeecad firfircoon oo wanaagsan, qaanso deggan, muuqaal qurxoon oo fiican, kala firdhin yar. Mag alxanka isha.
Astaamo badan iyo ilo koronto isticmaal, dabeecad alxanka sifo aad u fiican, tusaalaha 630 ayaa loo isticmaali karaa qulqulka hawada kaarboonka. Gawaarida Inverter gaaska gaashaanka u leh.
Automatic Inverter arkay isha alxanka arc quusin
Waxqabadka wanaagsan ee nidaamka, ku dhowaad 100% qaanso heer sare ah, muuqaal muuqaal wanaagsan; Saw alxanka isha
Awoodda gelinta oo hooseysa, mug yar, miisaan yar, keydinta tamarta iyo waxtarka sare. Waxay aragtay isha alxanka qotodheer.
Dhammaan qaybaha muhiimka ah sida moduleka IGBT, wareegga isku dhafan, wareejinta iyo hagaajinta ayaa ah sumcad caan ah oo adduunka ah oo leh kalsooni sare; Isha alxanka Argon arc Tig.
Shaqooyinka alxanka Stick dhammaantood waxay la mid yihiin kuwa alxamida taxanaha ZX7- IGBT. Isha alxanka Argon arc Tig.
Iyada oo ku saleysan hawsha asalka ah waxay adeegsaneysaa kantaroolka PLC waxayna ka dhigeysaa geeddi-socodka oo dhan ee soo kabashada qulqulka alxanka, gudbinta iyo quudinta inay gaaraan otomaatig dhameystiran. Markaad bedesho gabalka shaqada uma baahnin mashiinka xiritaanka.
Mashiinka axdi qarameedka birta ah ee birta ah
Mashiinka axdi qarameedka birta ah ee birta ah wuxuu qaataa mashiinka wax lagu shiidayo ee goynta madaxa.
Waxaa jira qalab lagu ilaaliyo shaqada, waxay ka dhigaysaa booska saxanka birta mid ku habboon.
Waxaa jira qalab taageero khaas ah oo ka hooseeya qalabka, oo loogu talagalay qalab hawleed dheer.
Mashiinka Mashiinka axdi qarameedka ah ee birta ah ee otomaatigga ah wuxuu qaataa silig isku dhejisan, oo ka ammaan iyo qurux badan siligga caadiga ah.